सांसदको प्रश्न : हाम्रो मर्यादा क्रम किन तल ? - Durbin Nepal News
दूरबिन नेपाल ५ चैत्र २०७५, मंगलवार १४:४४
काठमाडौँ । हामी जनताबाट निर्वाचित भएका हौँ, तर जिल्लाको कार्यक्रममा जाँदा हाम्रो मर्यादाक्रम पूर्वमन्त्रीभन्दा तल राखियो । यसले हामीलाई असजिलो बनाएको छ । यो समस्याको समाधान गर्ने विषयमा सरकारले केही पहल गरेको छैन ? यो भनाइ हो प्रतिनिधिसभाका सदस्य झपट रावलको ।
५ चैत्र २०७५, मंगलवार १४:४४ मा प्रकाशित